मध्य रात १ बजेर ४६ मिनेट देखि इतिहासकै दुर्लभ चन्द्रग्रहण, यी राशिमा पर्दैछ यस्तो प्रभाव ! - Nepal Insider
Home/समाचार/मध्य रात १ बजेर ४६ मिनेट देखि इतिहासकै दुर्लभ चन्द्रग्रहण, यी राशिमा पर्दैछ यस्तो प्रभाव !
असार ३१ (जुलाई १६) गते आकाशमा एक अद्भुत खगोलिय घटना देख्न पाईनेछ । आषाढ शुक्ल पक्ष गुरु पूर्णीमाका दिन खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण लाग्नेछ । यो चन्द्र ग्रहण एशिया, युरोप, अफ्रिकी देशहरु, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका र उत्तर अमेरीका को पूर्वी भागबाट देखिनेछ । उत्तर अमेरिकाको उत्तर र पश्चिम भाग र ग्रिनल्याण्डबाट देखिने छैन।करिब ३ घण्टा लाग्ने चन्द्र ग्रहण नेपाली समय अनुसार मध्य रात १ बजेर ४६ मिनेटमा ग्रहण स्पर्श हुनेछ। राति ३ बजेर १५ मिनेटमा मध्य समय र मोक्ष ४ बजेर ४५ मिनेटमा हुनेछ’ ।
हतियार सहित आएका विप्लव समुहका कार्यकर्ता माथि प्रहरीले गोली चलायो, एक जना ठाउँको ठाउँ ढले (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
यस्ता तस्वीरले सच्चा कृषकको सम्मान की खिल्ली उढाईयो ? [हेर्न लाज लाग्ने असार १५]